Ndeipi mitambo mitsva paApple Arcade? | Ndinobva mac
Ndeipi mitambo mitsva paApple Arcade?
Zviri pachena kuti mitambo yeApple haina hushamwari uye kwenguva yakati iyo Cupertino kambani haisi kuwedzera mitambo kune yayo Apple Arcade chikuva. Mupfungwa iyi Musi waApril 2, iyo femu yakatanga nhevedzano yemitambo mitsva uye kubvira ipapo haina kuwedzera imwezve.
Musi iwoyo kambani yeCupertino yakazivisa kuti Apple Arcade ichawedzera mitambo mitsva makumi matatu kusevhisi uye ndozvakaitwa., kuwana huwandu hwemitambo zana nemakumi masere. Asi kubvira ipapo zano raApple neiri Apple Arcade sevhisi inoita kunge yakamira uye kunyangwe ichisimudzira mitambo mitsva yakati wandei se "Kuuya Munguva pfupi" ivo havauyi zviri pamutemo.
Zvinogoneka kuti mushure memwedzi iyi pasina chiitiko nhau dzinotangazve mangwana
Kubva Chishanu Chikumi 4, Apple Arcade inotarisirwa kutangazve kuuya kwemitambo mitsva kusevhisi mushure menguva ino yatisati taona chero nhau. Izvi zvirinani izvo zvavanotaura kubva kune inozivikanwa webhu MacRumors.
In the Webhusaiti yeApple Ivo vanotiudza kuti vanowedzera mitambo vhiki nevhiki asi izvi hazvisizvo chaizvo nekuti mune ino nyaya tanga tisina nhau kwenguva yakati kunyangwe hazvo kusvika kwemutambo kunotaurwa: Solitaire, Inks, Frenzic Overtime kana Nhoroondo dzeUmambo Kumhanya pakati pevamwe ...
Apple Arcade inoburitsa mazita matsva uye zvemukati zvinyorwa vhiki rega rega. Unogona kuona kuburitswa kuri kuuya muKuuya Munguva pfupi chikamu cheArcade tab yeApp Store.
Iyi yekutamba mutambo webasa yakavhurwa zviri pamutemo gore rapfuura 2019 uye zvinoita sekunge chaizvo haina kubudirira zvakanyanya nevashandisi ye Mac, iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV uye Mac ye4,99 euros pamwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Ndeipi mitambo mitsva paApple Arcade?
Inotevera 16-inch MacBook Pros yakawanikwa mune Chinese chinodzora dhatabhesi
Iwo akateedzana La Costa de los Mosquitos akavandudzwa kwemwaka wechipiri